Yaa ka dambeeyey khilaafka soo kala dhex-galay’ guddiga doorashooyinka? | Warbaahinta Ayaamaha
Yaa ka dambeeyey khilaafka soo kala dhex-galay’ guddiga doorashooyinka?
MUQDISHO-AYAAMAHA-Guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa waxaa la sheegay in uu soo kala dhex-galay khilaaf ka dhashay soo saarista harbaaca doorashada Golaha Shacabka Soomaaliya ee shalay la shaaciyey, kadib qoraal ka soo baxay guddigaasi.
War qoraal ah oo uu ku saxiixnaa guddoomiyaha guddiga maaliyada doorashooyinka ee ( FEIT) ayaa looga hadlay habraacyadii doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, kaas ooku socotay Madaxda wadatashiga qaranka islamarkaana lagu ogeesiiyay guddiga hirgalinta doorashooyinka heer federaal.
War-qadaan ayaa loogu soo horjeestay habraacyadii ay soo saareen guddiga doorashooyinka heer federaal, kaas oo lagu tilmaamay in aan loo marin wadadii haboonayd islamarkaana aan wax laga ogeyn shaacintooda.
Khilaaf adag ayaa durba hareeyay soo saarista habraaca doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, kaas oo u dhaxeeya xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal lama oga halka uu ku dambeyn doona khilaafkan soo shaac baxay balse arrintan ayaa sababi karta in ay xumaato wada-shaqeynta xubnaha gudiga doorashooyinka.